31 desambra – Trinitera Malagasy
1 Joany 2, 18-21 /
Salamo 95 /
Md Joany 1, 1-18
Mifarana ny taona fa mitohy ny fiainana. Ary izay no hafatrafaran’ny vavaky ny fiangonana amin’ny lamesa anio. Ny fahaterahan’i Jesoa, ny Noely ankalazaintsika tokoa manko, izany hoe ny Misterin’ny Teny Tonga nofo, izay lazain’i Joany ao amin’ny Evanjely, no nataon’Andriamanitra ho fototra iorenan’ny fivavahana ary mitondra azy amin’ny fahalavorariana, amin’ny maha-vahoakan’Andriamanitra antsika (vavaka fangatahana). Izy Andriamanitra no loharano ipoiran’ny fitiavam-bavaka sy ny fiadanana marina (vavaka fanolorana) ka mitantana antsika hahazo fanafody avy amin’ny fitiavany, ka rahefa ankahereziny sy alany alahelo ety an-tany dia miezaka bebe kokoa amim-pitokiana ho tody any amin’ny fonenana mandrakizay (vavaka aorian’ny kominio).
Fanao ny jery todika rehefa mifarana ny zavatra iray. Ary ny jery todika hanentanan’ny Fiangonana antsika amin’ny Taona diavina dia hoe, i Kristy tokoa ve no niandohan’ny fiainantsika, ny niandohan’ny fanisàna ny androntsika, misy fahatsiarovana azy, ivon’ny tantara ve ny taona vaovao andrasantsika?
Na Kristianina na ny tsy mpino dia mankalaza io taona io, saingy vitsy no mahatsiaro fa i Kristy no ivo ankalazaina eo. Ilay teny tonga nofo no hifaliantsika satria taona 2020 DC, ohatra, dia 2020 “aorian’i Kristy” isika izao. Dia atao ahoana moa fa dia tavoahangy sy alim-pandihizana no hiandrasantsika azy. Hafaliana ao aminy ve izany? Hafaliana mampiombona ve? Dia hampiova ny fiainantsika ho tsara ve ny “manala azy indray alina”, dia raha sanatria an’izany diso tafahoatra dia mba mikônfesy kely dia vita?
Ny lainga rehetra dia tsy avy amin’ny marina, hoy i Md Joany, ary indraindray tsy lainga avy amin’ny olona ihany no mahavoa antsika fa lainga avy amin’ny lamaody, avy amin’ny fanjakan’ilay andriamanitra “mamôna”, ka mahasondriana vetivety, fa avy eo mamela mangidy tsy tohaina ho an’ny fiainana manontolo. Ny teny no manavaka antsika amin’ny biby hafa: natao hampitana fahalalana sy hifandraisana, hampivoarana ny asa sy ny fiaraha-monina, hampitomboana ny firaisan-kina sy ny fahafahana, saingy mety koa ampiasan’ny olona hamitahana sy hampiadiana, hitsikerana mba hamotehana, hiarovana ny tombontsoa manokana sy hanandevozana ny hafa. Ny teny, tonga fiainana dia mbola lozaloza kokoa noho izany, raha tsy mifanaraka amin’izay lazaina ny atao.
Ahoana ny fiheveran’ny tsy mpino ny fihetsiky ny kristianina, mitory ny fitiavan’Andriamanitra sy ny fitiava-namana, kanefa mandany misimisy kokoa amin’ny fiandrasana ny taona vaovao noho izay mba rakitra na fanomezana mba omena ny mahantra ny andro noely? Afaka hinoana ve fa ny fitiavan’Andriamanitra sy ny fitiavan’i Kristy tokoa no manjaka ao amin’izy ireo?
Isika no noharian’Andriamanitra mba haneho ny endriny ary hibanjina ny fitiavany ka hanahahaka azy. I Adama moa efa niafina tsy te hijery ilay endrika fitiavana nahary azy satria menatra ny nataony, tamin’ny tsy fitokisana ny teniny. Ilay Adama vaovao kosa anefa nanaiky ho tonga olombelona, mba hampamirapiratra indray ilay endrik’Andriamanitra. Izy no ilay Teny nahariana ny zavatra rehetra, ilay Teny nahariana antsika, Andriamanitra nahary antsika, tonga nofo toa antsika mba hahatonga antsika koa ho zanak’Andriamanitra.
Izay mandray ny Teny ho fahazavana ihany anefa no omena ny fahazoana ho tonga zanak’Andriamanitra. Tsy manery ny fitiavana: isika no misafidy na “tso-drano na ozona” (Det 11, 27), na fiainana na fahafatesana (Det 30, 15). Ny fibanjinantsika ny voninahitr’ilay Teny tonga nofo ka hakantsika tahaka azy manao soa hatraiza hatraiza no lalana miditra mankamin’ny fahasambarana. Ny lalan’i Moizy dia mitondra antsika ho amin’izany hafenoan’ny fitiavana izany. i Jesoa no ilay Moizy vaovao hitondra antsika any amin’ny tany nampanantenaina.
Ny Fanahy Masina no mahatonga nofo ao amintsika ny Teny, ary afaka mampiboiboika ao am-pontsika ny fitiavam-bavaka sy ny fiadanana marina (vavaka fanolorana) izay mifototra amin’ny fahatongavan’i Kristy ho nofo. Hitalaohoantsika izy mba hanilo ny fiainantsika ka tsy ho resin’ny lainga afitsoky rivomaherin’ny rendrarendra sy ny ankoso-bolamenan’izao tontolo mandalo izao.
Mirary anao taona vaovao isaina manana an’i Jesoa Kristy ho ivony.
1 janoary: Masina Maria Renin’Andriamanitra